नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृत दिएर मर्जर निर्देशिका ल्याउँनु व्यवहारिक देखिएन – Insurance Khabar
नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृत दिएर मर्जर निर्देशिका ल्याउँनु व्यवहारिक देखिएन
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७६, सोमबार ११:४९
कवि प्रसाद पाठक,प्रशासक,राष्ट्रिय बीमा संस्थान
३० बर्ष कृषि विकास बैंकमा काम गरेका कवि प्रसाद पाठकले राष्ट्रिय बीमा संस्थानामा प्रशासकको रुपमा प्रवेश गरेको एक बर्ष पूरा भईसकेको छ । २०७५ साल जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पाठकलाई प्रशासकको रुपमा नियुक्त गरेको हो । झापामा स्थायी घर भएका पाठकले अर्थशास्त्र, गणित र कानूनमा स्नातक र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नेपालमा नयाँ बीमा कम्पनीहरु थपिएसँगै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढी रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान भने अझै पनि आफना कदमहरु सुस्त गतिमा बढाईरहेको छ । बजारमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धामा आफुलाई स्थापित गर्न कम्पनीले के गर्दैछ ? नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ । वर्तमान बीमाको अवस्था कस्तो छ ? सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हालको स्थित आगामी योजना के छ भन्ने बिषयमा कम्पनीको प्रशासक कवि प्रसाद पाठकसँग इन्स्योरेन्सखबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार :
अहिले बैंक र बीमा कम्पनी बिच धमाधम बैंकास्याेरेन्स सम्झौता भएको समाचार आउँन थालेका छन् । कानुनी रुपमा नभएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले काम गर्नु कतिको जायज हुन्छ त ?
संचार माध्यममा बैंकास्योरन्सको कुराहरु आईरहेको छ । अहिले हामीले हेर्नु पर्दा यसलाई संस्थागत अभिकर्ताको रुपमा लिनुपर्छ । बैंकास्योरेन्सको माध्यमबाट यसको मान्यता नभएको हुदाँ यस कुरामा बिशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको देखिन्छ । कानुनी रुपमा मान्यता नभएपनि यो काम भईरहनु राम्रो कुरा भने हैन । यस बिषयमा समितिले बिशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
बैंकहरुले आफना कर्मचारीलाई टार्गेट नै दिएर बीमा विक्री गर्न थालेका छन् । यसले बीमा बजारमा भित्राउँने विकृतिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो सुरुवातको चरणमा छ । यसको पूर्ण रुपमा असर भने देख्न नै बाँकि नै रहेको छ । भोलिको दिनमा त्यस्तो पोलिसीहरु नवीकरण हुने वा हैन भन्ने बिषयमा पनि बुझनु जरुरी रहेको छ । बीमा जर्बजस्तिमा गराउनु राम्रो हैन । यसलाई व्यवस्थित गनुपर्छ । पोलिसी बेच्ने र टार्गेट पूरा गर्न मात्र सोच बनाएर बैंकले बीमा पोलिसी दिईरहेको छ भने त्यो गलत अभ्यास हो । बीमाको पोलिसी जर्बजस्तिमा दिदाँ भोलि यसले बीमा बजारमा नकारात्मक असर ल्याउन सकिन्छ । बैंकले कर्मचारीलाई मात्र जर्बजस्तिमा टार्गेटको बाटो देखाउँदा बीमा क्षेत्रमा यसले असर पक्कै पनि गर्छ । बैंकमा पनि कर्मचारीहरुले बीमा गराउदाँ नवीकरण लगायत अन्य कुराको बिषयमा पनि ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनु जरुरी रहेको छ, जसले बीमा बजारमा गलत भ्रम तोड्न सहज बनाउछ । बैंकले बीमाको पहुँचमा पनि सहयोग गर्ने पनि देखिन्छ । तर बैंकले कमीशनको लोभमा बीमालाई गलत दिशातिर लैजानु हुदैन । सही रुपबाट अघि बढेमा बैंकले बीमाको पहुँचमा पनि सहयोग गर्ने पनि देखिन्छ । यसमा समस्या निम्त्याउन नदिनको लागि बीमा समितिले पनि बिशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
बीमा समितिले मर्जर निर्देशिका परिमाजर्न गरी कम्पनीहरुलाई मर्जरको लागी प्रोत्साहित गरेको छ । नेपालमा बीमा कम्पनीहरुको मर्जरको सम्भावना र आवश्यकता कत्तिको देख्नु भएको छ ?
बीमाको पहुँचको आधारमा हेर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरु बढेसँगै बीमाको बजारको पहुँचमा वृद्धि आएको छ । यही आथिक बर्ष भित्र नयाँ कम्पनी स्विकृति र मर्जरको बिषय एकै पटक उठेको छ । बीमा समितिले बीमा नयाँ बीमा कम्पनीलाई यसै बर्ष बजारमा भित्रायाउने र मर्जर गर्ने काम एकै पटक थलानी गरेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीलाई भन्दा पनि निर्जिवन बीमा कम्पनीलाई चाहि मर्जर तिर लान लागेको जस्तो देखिन्छ । मर्जरमा लग्दा पनि फोर्स मर्जर भन्दा पनि आकर्षक प्याकेज ल्याएर अघि बढायो भने अझै राम्रो हुन्छ । बीमा समितिले हालै परिमार्जन गरिएको मर्जर निर्देशीकामा केही आकर्षक प्याकेजहरु पनि रहेका छन् ।
मेरो विचारमा यसै बर्षमा नयाँ कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिनु र यसै पटक मर्जरको कुरा आउदाँ नमिलेको हो कि भन्ने लागेको छ ।
बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई पूँजी जुटाउँन दिएको अवधि पनि सकिएको छ । तपाईहरुले कसरी पूँजी पुराउँदै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो कम्पनीको कुरा गर्दा हामीलाई पूँजी पुराउनमा खासै समस्या भने रहदैन । बैशाख भित्रमा तेस्रो त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने हो तर एनआरएफ लागु हुने कारणले गर्दा यसमा केही समय ढिला भईरहेको हो । कम्पनीको तेस्रो त्रैमासको वित्तिय विवरण पनि ठिकै नै रहेको छ ।
बीमा संस्थानको केही समय अघि देखि साधारणसभा भएको छैन, त्यसैले उक्त समयदेखि नै पूँजी वृद्धि समेत रोकिएको हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन समयमा नभएकैले वित्तीय विवरण फाइनल हुन समय लागेको र यसले गर्दा अन्तिम लेखा परीक्षण र साधारणसभा समेत रोकिएको अवस्था हो ।
हालको कुरा गर्ने हो भने २०६६/६७ सम्मको बीमाङ्कीय मूल्यांकन भएर त्यसको स्वीकृतिको लागि बीमा समिति पठाइसकेका छौं भने २०६९/७० सम्मका बीमाङ्कीय मुल्यांकनको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ यसलाई पूर्णता दिई समितिबाट स्वीकृति लिने तयारीमा रहेका छौं ।
त्यस लगत्तै हामी पहिलो चरणमा आथिक बर्ष २०६९/७० सम्मको साधारणसभा गर्नेछौ । दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष ०७२ /०७३ सम्मको साधारणसभा सम्पन्न गर्नेछौं । यही आर्थिक बर्षभित्र बाँकी अवधिको लेखापरीक्षण कार्य समेत सम्पन्न गर्ने योजना छ । दश वर्षको साधारणसभा गर्दा बोनस शेयरबाटै पूँजीलाई एउटा तहमा पुर्याउँछ । बाँकी पूँजी पुर्याउन संस्थानले तयार गरेको पूँजी वृद्धि योजना अनुरुप गर्न हाम्रा प्रोमोटरहरु तयार नै रहेका छन् ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ अनुसार अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैंया मात्र हो । यो बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । हाल बीमा ऐन संसदबाट पारित हुने क्रममा छ, यसले संस्थानलाई ऐन जारी भएको एक बर्षभित्र कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदबाट बढीमा ३ महिनाभित्र ऐन पारित हुन्छ भनिएको छ । त्यसो भयो भने अबको १५ महिनाभित्र हामी कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार ऐन संशोधन गर्ने नयाँ बीमा ऐनलाई हामीले पर्खेर बसेका हौं । यसबारे समितिका उच्च अधिकारीहरुसँग एक प्रकारको सहमति भइसकेको छ । तोकिएको समयावधिभित्र संस्थान पूँजी वृद्धि गर्न सक्षम छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवनबीमा मार्फत करिब ३ लाख राष्ट्रसेवकको बीमा गरेका छौं । यसबाट हाम्रो बीमा शुल्क र बीमा कोषमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
लामो समय देखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानले वित्तीय विवरण पारित गर्न सकेको छैन । जसका कारण तपाईहरुको बीमितहरु भ्रममा परेका छन् । बोनस कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ त ?
हामीले सबै बीमा योजनाका लागि एउटै दर ६५ रुपैयाँ प्रतिहजारको दरमा बोनस दिँदै आएका छौँ । सबै ग्राहकलाई पुरानो अवधिको लागि त्यही दरमा नै बोनस दिइन्छ । अबका दिनहरुमा प्रोडक्ट र टर्मअनुसार छुट्टाछुट्टै बोनस दर निर्धारण गर्नेगरी जाने सोच बनाएका छौँ ।
बीमा समितिको स्वीकृत पाएको भनेको ६६ प्रतिशत हो । बीचको अवस्थामा एक्चुरी भ्यालुएसनको कारणले गर्दा वित्तिय विवरण हामीले पािरत गर्न सकेका छैन । बीमांकी मूल्य निधारण भएपश्चात् केही सुधार हुने हामीले देखेका छौ ।
सफ्टवेयर का कुरा कुन चरणमा पुगेको छ ?
यो प्रकृया निकै लामो समय देखि चलिरहेको थियो । भेन्डरले समय थप गर्न माग गर्ने तर काम नगर्ने हुँदै आएको थियो । अहिले हामीले केही समय दिएर काम सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेका छौ । कामको अवस्था मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न संचालक समितिले विज्ञ समेत रहेको एउटा उपसमिति गठन गरेको छ । त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेर अगाडी बढ्ने छौ ।
यसले ठूलो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ । सफ्टवेयर नभएकै कारणले विभिन्न शाखामार्फत दिनुपर्ने सेवाहरु पूर्ण रुपले दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
सफ्टवेयर भएको भए हाम्रा ग्राहकले देशभरीका जुनसुकै शाखाबाट पनि सेवा पाउने व्यवस्था रहेका हुन्थ्यो ।
प्रिमियम क्याल्कुलेसनको लागि हामीले अहिले किताबको पाना पल्टाउनुपर्छ । हामी नयाँ सफ्टवेयर मार्फत आफ्नो व्यवसाय गर्न तयारीमा रहेका छौ । हामीले नागरिक लगानी कोषबाट आएको राष्ट्रसेवकहरुको बीमाको लागि चाहिँ नयाँ सफ्वेयर नै प्रयोग गरिरहेका छौं । यसमा साथै अन्य ग्राहकहरुका लागि पनि चाडै नै सफट्वयर ल्याउने तयारीमा रहेका छौ ।
नयाँ कम्पनी थपिए पछि नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ नि ? यसलाई कसरी लिनु भएको छ ।
बजार प्रश्स्त मात्रामा खाली नै रहेको छ । नयाँ कम्पनीहरु आक्रमक शैलीमा बजारमा आईरहेको छ । नयाँ कम्पनी आएसँगै बजारमा प्रतीप्रधाको भावना पनि बढ्दै गईरहेको छ । नयाँ कम्पनीहरुको उपस्थिति भएसँगै यसको पहुँँचमा समेत वृद्धि आएको छ । यसले बीमा बजारमा सकारात्मक नै लिएको छु । बीमा बजारमा सबैभन्दा बढी चेतनाको अभाव रहेको छ । जसको कारणले गर्दा यसको पहुँचमा केही कमी भएको हो ।
हिजोको दिनमा पूराना बीमा कम्पनीहरु परम्परगत शैलीमा अघि बढीरहेको थियो । नयाँ कम्पनीहरुको उपस्थितिले पूराना कम्पनीहरुलाई पनि घच्घचाएको छ । पूरानो मात्र नभई नयाँ कम्पनीसँग नयाँ शैलीका साथ अघि बढ्न पनि मद्दत गरेको छ ।
नयाँ बीमा विद्येयकमा गरिएको अभिकर्ताको व्यवस्थाका कारण अभिकर्ताहरु रुष्ट छन् । समितिले बैंकास्योरेन्स छुट दिएर अभिकर्तालाई बाईकट गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अभिकर्तालाई बाईकट गर्न कत्तिको सान्दभिर्क छ त ?
अभिकर्ताहरुबाट र बैंकबाट बिक्रि हुने पोलिसीहरु छुटै हुनु पर्दछ । तत्काललाई यो लागु नगरे पनि भावी दिनमा यस्तो निर्देशीका जारी गर्यो भने यसमा समस्या नआउला भन्न सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अभिकर्ता र बैंक दुबैलाई नै राम्रो हुने देखिन्छ । भावी दिनमा समितिले नै दुबैले बेच्ने पोलिसीको छुटा छुटै निर्देशीका जारी गरेको खण्डमा यसले अभिकर्ता र बैंक दुबैलाई सहज हुने र रुष्ट हुने वातावरण पनि सिर्जना नहुने देखिएको छ ।
अभिकर्ता नै बीमा कम्पनीको मेरुदण्ड हो । अभिकर्ता बिना बीमा कम्पनी सम्भव नै छैन । बीमाको पहुँचमा विस्तार गर्नुमा उनीहरुको पनि हात रहेको छ । तर बैंकास्योरेन्सलाई छुट दिँदा भोलिको दिनमा रोजी रोटि खोसिने पो हो कि भन्ने त्रास अभिकर्ताहरुमा आउनु स्वभाविक हो । यसमा बीमा समितिले पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ ।
नेपालको पछिल्लो बीमा व्यवसायलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
स्वस्थ प्रतिपर्धा गरेर अघि बढ्न सकेमा बजारले राम्रौ प्रतिफल दिन्छ । बीमाको बजार अघि बढ्ने प्रकृयमा मै रहेको छ । बजार पुरै नै खालि रहेको छ । बीमा बजारमा सम्भावना प्रश्स्त रहेका छन् । हाल कम्पनी बढेसँगै प्रतिस्पधा पनि बढ्दै गऐका छ । सम्रग रुपमा हेर्दा बीमाको बजार राम्रो नै छ भन्नुपर्छ ।
बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि सरकारले के गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
चेतनाको काममा सरकारले पनि केही कदम अघि बढाएमा यसको पहुँचमा समेत केही विस्तार हुने स्थित देखिन्छ । बीमा व्यवसाय बिस्तार गर्नको लागि सरकारले बिद्यालय स्तरबाट नै पाठ्यक्रममा राख्दा अझ स्तरीकृत हुने देखिन्छ । बीमा समितिले त आफनो ठाँउबाट बीमा चेतनाको काम अघि बढाईरहेको नै रहेको छ । कम्पनीले पनि आफनो तर्फबाट बीमा चेतनाको लागि काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । सरकारको तर्फबाट बजेट आउदा बजेटको सिलिङ चाँहि बढाईदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । करमा समेत केही छुट हुनुुपर्छ । केही आकर्षण पाटो देखाएर बीमामा ल्याउन सकियो भने यसको पहुँचमा समेत विस्तार हुन सहयोग पुग्दछ ।
बीमा सचेतना अभिबृद्धिको लागि तपाईको कम्पनीले के गर्दैछ ?
हाम्रो कम्पनीले हालसम्म त्यसको लागि खासै केही गर्न सकेका छैनौ । तर आगामी दिनमा बीमा सचेतना अभिवृद्धिको लागि पनि कार्यक्रम अघि बढाउने हाम्रो योजना रहेको छ । बीमा सचेतनाको लागि हामीले सामुदायिक र प्राईभेट बिद्यालयहरुमा पनि गएर बीमा सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम दिने हाम्रो योजना रहेको छ ।
कम्पनीका आगामी रणनितिहरु के–के छन् ?
जीवन बीमाको क्षेत्रमा अभिकर्ता नै कम्पनीको मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले नयाँ अभिकर्ताको संख्या वृद्धि गर्ने र पुरानालाई रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ दिने सोच बनाएका छौं । यस आर्थिक वर्ष नयाँ अभिकर्तालाई तालीम दिने लक्ष्य भएकोमा केही अकिर्ताहरुलाई तालिम दिइसकेका छौ भने अन्य तालीमको कार्यतालिका बनाउँदै गईरहेका छौ । कर्मचारी र सफ्वेयरको योजना पूरा भइसकेपछि अर्को वर्षदेखि कम्पनीको व्यपारलाई तिर लाग्छौ । जसको लागि अहिले रहेका ८ ओटा शाखाको संख्या बढाउने क्रममा छौ । बाहिर मार्केटिङ्ग जाने, विज्ञापन गर्ने काम भईरहेको छ । यसलाई पनि अघि बढाउने रहेको छ ।
नेपालमा बीमा व्यवसायलाई गतिशील बनाउन के गर्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय बीमा जागरण दिवस: बीमामा पहुँच बढाउन राज्यको भूमिका
अपर हेवाखोलाले असार २४ गतेदेखि आइपीओ निष्काशन गर्दै, कति कित्तासम्म दिने आवेदन ?
सूर्या र ज्योति लाइफको स्वाप रेसियो डिडिएपछि मात्रै तोकिने, अहिलेसम्म निर्धारण नभएको कम्पनीको स्पष्टिकरण